Tagus မြစ်: သင်သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်မြို့များ ခရီးသွားသတင်း
လူးဝစ် Martinez | | ယေဘုယျ, ကြည့်ဖို့ဘာလဲ, ခရီးသွား
အထူးသဖြင့်စပိန်နိုင်ငံကိုသွားတဲ့ခရီးစဉ်ကိုသွားမယ် Tagus မြစ်သူ၏ဘဏ်များတွင်လှပသောမြို့ကြီးများ၊ မယုံနိုင်လောက်အောင်ရှုခင်းများ၊ ခမ်းနားထည်ဝါသောသဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့်ထူးခြားသောheritageရာမအမွေအနှစ်များရှိသည်။
Teruel ရှိ Sierra de Albarracín de los Montes Universales တွင် Tagus သည် Iberian ကျွန်းဆွယ်ကိုဖြတ်ပြီး ၁၀၀၈ ကီလိုမီတာအထိဖြတ်သန်းစီးဆင်းသည်။ ယင်းတို့အနက် ၈၁၆ စပိန်ပိုင်နက်နှင့်ကျန်နယ်မြေများမှာလစ္စဘွန်းသို့စီးဆင်းကာအထူးသဖြင့် Mar de la Paja မြစ်ဝတွင်တည်ရှိသည်။ ဤမျှရှည်လျားသောလမ်းရှိသော်လည်းမြို့ကြီးများစွာသည်ရေမချိုးနိုင်သော်လည်းအားလုံးလည်ပတ်သင့်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်ပတ်သက်။ သင်ပြောပြလိမ့်မယ်။
1 Aranjuez - တန်ဂပ်မြစ်နားမှာရေချိုးတဲ့တော် ၀ င်နေရာတစ်ခု
2 Toledo: စင်ကြယ်သောသမိုင်း
3 Talavera de la Reina နှင့်၎င်း၏ကြွေထည်
4 လစ္စဘွန်း - တဂွတ်မြစ်၏ပါးစပ်
Aranjuez - တန်ဂပ်မြစ်နားမှာရေချိုးတဲ့တော် ၀ င်နေရာတစ်ခု
အဆိုပါအဖြစ်လူသိများလှပသောမက်ဒရစ်မြို့ Aranjuez ၏တော်ဝင်ဆိုက်ကို စပိန်ဘုရင်များသည်ကာလရှည်ကြာစွာနေထိုင်ခဲ့သည့်နေရာဖြစ်ရာသင့်အားပြသရန်များစွာရှိသည်။ ထို့ကြောင့် တော်ဝင်နန်းတော်၁၆ ရာစုတွင် Felipe II အမိန့်ဖြင့်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
၎င်း၏ဆောက်လုပ်ရေးကိုဗိသုကာ Juan Bautista de Toledo မှစတင်ခဲ့သော်လည်းသူမပြီးဆုံးဘဲသေဆုံးသွားခဲ့သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်၎င်းအလုပ်များသည်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ကာလို (၃) ကားလို့စ်၏အချိန်ကာလအထိအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တစ်လျှောက်လုံးတွင် Juan de Herrera နှင့် Francisco de Sabatini တို့ကဲ့သို့သောဗိသုကာပညာရှင်များသည်ဆောက်လုပ်ရေးတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့ကြသည်။
ဖြစ်နိုင်လျှင်ပိုအထင်ကြီး ဥယျာဉ်များ နန်းတော်ပတ်လည်။ ဤရွေ့ကားအလွန်umentရာမစမ်းရေတွင်း, ရုပ်ပွားတော်နှင့်ကျော်ကြားကဲ့သို့သောအဆောက်အ ဦး များနှင့်ပြည့်ဝ၏ဥယျာဉ်၏စစ်မှန်သောလက်ရာဖြစ်ကြသည် Labrador အိမ်, Prince ၏ဥယျာဉ်တော်၌တည်ရှိသော neoclassical အိမ်ကြီး။
ထို့အပြင်သင်သည် Aranjuez သို့ရောက်သောအခါ၎င်း၏ဥယျာဉ်၏ထူးခြားသောထုတ်ကုန်များကိုကြိုးစားရန်မမေ့ပါနှင့်။ အထူးသဖြင့်ကျော်ကြားသောကညွတ်နှင့်စတော်ဘယ်ရီများ၊ ဥပမာ, စတော်ဘယ်ရီနှင့်အတူချဉ်မှုန်။
အကယ်၍ Aranjuez သည်alရာမအဆောက်အအုံကြီးဖြစ်လျှင် Toledo သည် ပို၍ အရေးကြီးသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ Lisbon မှလွဲ၍ Tagus မြစ်ကိုရေချိုးသောအရေးအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စပိန် - Visigothic နိုင်ငံ၏မြို့တော်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ဖြစ်သည် ယဉ်ကျေးမှု crucibleခရစ်ယာန်ကတည်းကဂျူးနှင့်အာရပ်တို့အတူတကွနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။
၎င်း၏ကြွယ်ဝသောသမိုင်းကကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရမည့်အထိမ်းအမှတ်များစွာ (အမှန်မှာတစ်မြို့လုံးကြေငြာခဲ့သည်) ကိုကျွန်ုပ်တို့အားအမွေခံထားသည် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် 1986 ခုနှစ်) ။ ၎င်းသည်၎င်း၏နံရံများဖြစ်သည့်အပြင်၊ ဤတံခါးများတွင် Mudejar စတိုင်၏နေ၏တံခါးကဲ့သို့အံ့ဖွယ်တံခါးများ၊ Cambrón, Renaissance နှင့် Bisagra ၏အသစ်နှင့်အဟောင်းတို့၏။
ဒါပေမယ့်ပို။ ပင်အထင်ကြီးဖြစ်ပါတယ် Santa Maria ၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်း, ငါတို့တိုင်းပြည်အတွင်းရှိ Gothic တောင်ထိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်စဉ်းစားမိတယ်။ ၎င်းအတွင်းထဲသို့ ၀ င်ရန်မမေ့ပါနှင့်။ သူ၏အတွင်းပိုင်းသည် Cardinal Mendoza ၏သင်္ချိုင်းနှင့် New Kings၊ Mozárabe၊ Epiphany သို့မဟုတ် Santiago တို့၏ကျောက်မျက်များဖြစ်သည်။
တိုလီဒိုတွင်လည်းနန်းတော်မြောက်မြားစွာရှိသည်။ သူတို့ကိုအကြား, သင်ကြည့်ရှုရန်ရှိသည် ဂယ်လီယာနာရဲ့ဘုရင်ကို Al-Mamun နှင့် XNUMX ရာစုအတွင်းတည်ဆောက်ခဲ့သော Mudejar ရတနာ။ ၁၅ ရာစုမှ Fuensalida နှင့် Posada de la Santa Hermandad တို့၏ (သို့) Casa del Temple ဟုခေါ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, umentရာမ Toledo ၏အာရုံကြောစင်တာသည်ကြောင်းကိုငါသိ၏ Zocodover စတုရန်း။ ယင်း၏အစိတ်အပိုင်းကို Juan de Herrera ကတည်ဆောက်ခဲ့သော်လည်း၎င်းသည်အာရပ်ခေတ်မှနမူနာများကိုထိန်းသိမ်းသည်။ ၎င်း၏ဝင်ပေါက်များထဲမှတစ်ခုမှာ Arco de la Sangre ဟုခေါ်သည်။ ခရီးသွားရထားသည်မြို့၏အဓိကလမ်းများမှတစ်ဆင့်၎င်း၏နှစ်ဖက်စလုံးမှထွက်ခွာသည်။
Toledo မှာစွဲမက်စရာကောင်းတဲ့အဆောက်အ ဦး တစ်ခုရှိရင်Alcázarပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ဆောက်လုပ်ရေးသည်မြောက်မြားစွာသောတိုးချဲ့ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းများကိုခံနေရသော်လည်းကာစတီလီယန်၏အယ်လ်ဖွန်ဆို VI ခေတ်မှစတင်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတစ်ခုမှာပြည်တွင်းစစ်အပြီးဖြစ်ခဲ့ပြီး၎င်းကာလအတွင်း၎င်းသည်လက်တွေ့ကျကျဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသည်။ ရာစုနှစ်များတစ်လျှောက်နန်းတော်ကြီး၊ ဘုရင်များနေရာထိုင်ခင်း၊ စစ်တန်းလျားများနှင့်စစ်အကယ်ဒမီများရှိခဲ့သည်။ လောလောဆယ်သင်Alcázar the တွင်ရှာနိုင်သည် ကြည်းတပ်ပြတိုက်.
နောက်ဆုံးမှာတော့ပုံမှန်ဟင်းလျာများကိုမသုံးဘဲ Toledo ကိုမထားသင့်ပါဘူး ချစ်ခြင်းမေတ္တာ, carcamusas (ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်အတူပါးလွှာသောဝက်သား), မြက်ခင်းနှင့်အတူ Migas သို့မဟုတ်ပဲ။ သို့သော်သူတို့သည်အထူးကျော်ကြားမှုရှိသည် အဆိုပါ marzipansပင်ဇာစ်မြစ်၏သတ်မှတ်ရေးရှိသည်သော။
Talavera de la Reina နှင့်၎င်း၏ကြွေထည်
တိုလီဒိုပြည်နယ်မှထွက်ခွာခြင်းမရှိဘဲရောမခေတ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သော Talavera de la Reina ကိုတွေ့ရှိလိမ့်မည် Caesarobriga။ ဤမြို့တွင်နံရံများနှင့်ယင်း၏ albarrana မျှော်စင်များ၊ Huerto de San Agustín၊ အာရပ်ခံတပ်နှင့် Prado ၏ကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတကတော်၏ Basilicaအတွင်း၌အဖိုးမဖြတ်နိုင်သည့်ကြွေထည်ပစ္စည်းများဖြင့်အလှဆင်ထားသော Renaissance အံ့။ ဖွယ်ရာဖြစ်သည်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Talavera ဟာကျော်ကြားတဲ့အရာတစ်ခုခုရှိရင်အဲဒါကြောင့်ပဲ ကြွေထည်သူ၏မူလအစသည်မွတ်စလင်ခေတ်မှစတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းကိုကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။
မြို့ထဲကမထွက်ဘဲမနေနှင့် လေးဖြူဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် chorizo ​​နှင့်အတူပဲသေးငယ်တဲ့ပဲအချို့၊ အချိုပွဲအဘို့, ပစ္စတို talaverano နှင့် အိမ်တွေနို့၊ သစ်ကြံပိုးနှင့်သကြားအပေါ်အခြေခံသောမုန့်။
လစ္စဘွန်း - တဂွတ်မြစ်၏ပါးစပ်
မြို့ရဲ့တဂတ်စ်မြစ်တစ်လျှောက်ခရီးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါပြီ။ လစ္စဘွန်း။ ဤအရာသည်သင့်အားသဘာဝအရအံ့ဖွယ်ရာများဖြစ်သော Mar de la Paja မြစ်ဝဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်ပင်လယ်မှထွက်သွားပြီးကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြပြီးသောမြစ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ဒါပေမယ့်အားလုံးအထက်ကလစ္စဘွန်း၌လှပသောအထိမ်းအမှတ်များကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ နှင့်အတူစတင်ရန် Santa María la Mayor ၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှောင်းပိုင်း Romanesque Canon များအပြီးတွင် ၁၂ မှ ၁၃ ရာစုအတွင်းတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်သူ့ကို Carmo ခရစ်ယာန်သီလရှင်၁၇၅၅ ခုနှစ်မြို့ကိုရိုက်ခတ်ခဲ့သောငလျင်ကြောင့်အပျက်အယွင်းများအထင်အရှားတွေ့ရသည်။
သို့သော်လစ္စဘွန်းရှိအထင်ရှားဆုံးအဆောက်အအုံသည်ဖြစ်နိုင်သည် San Jorge ၏ရဲတိုက်, မူလအစသည် ၅ ရာစုမှ Visigothic ဆောက်လုပ်ရေးမှစတင်သည်။ ဤအဆောက်အ ဦး မှတန်ဖိုးထားနိုင်သောမြို့၏ထူးခြားသောရှုခင်းများကိုမလွတ်ပါစေနှင့်။
ရဲတိုက်သည်အထိမ်းအမှတ်ကျောက်တိုင်တစ်ခုဖြစ်သည် Alfama ရပ်ကွက်လစ္စဘွန်းတွင်အသက်အကြီးဆုံးနှင့်အကျော်ကြားဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ တကယ်တော့ဒီဟာကခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူကမြို့သူမြို့သားတွေအချင်းချင်းတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်သိကျွမ်းတဲ့လွတ်လပ်တဲ့မြို့တစ်မြို့လိုပဲ။ ၎င်းတွင် Santa Lucíaနှင့် Portas do Sol ကဲ့သို့သောရှုထောင့်များရှိပြီးသင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဓာတ်ပုံများကိုသင်ရရှိမည်။
Torre de Belém၏ဓာတ်ပုံ
အခြားတစ်ဖက်တွင်, Alfama အတွက်ဖြစ်ပါတယ် အမျိုးသားပန်းကန်၎င်းသည်ကြီးမားသောအဖြူရောင်အမိုးခုံးနှင့်သင်အလွယ်တကူခွဲခြားသိမြင်နိုင်သောအဆောက်အအုံတစ်ခုဖြစ်ပြီးလူးဝစ်ဒီကင်မရွန်းနှင့်ဗက်စကိုဒီဂမာတို့၏ cenotaphs များသည်ပေါ်တူဂီ၏သမိုင်းနှင့်အခြားအက္ခရာများအကြားမည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်။
အလားတူ၊ အင်္ဂါနေ့နှင့်စနေ၊ Feira da Ladraအားလုံးနီးပါးကိုရှာတွေ့နိုင်တဲ့စျေးကွက်ကြီးတစ်ခု။ အကယ်၍ သင်ကလစ္စဘွန်းမှပုံမှန်အရာတစ်ခုခုကိုရှာနေတယ်ဆိုရင်၊ အဆိုပါ funiculars မြို့ရဲ့အောက်ပိုင်းကိုအဆင့်မြင့်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ပေးတယ်။ ဒီရထားများအကြား, ဘုန်းအသရေနှင့် Bica ၏.
နောက်ဆုံးတော့ Tagus ၏နှုတ်တော်ထွက်မှာဖြစ်သည် Belem မျှော်စင်, Manueline စတိုင်၏ရတနာ (နှောင်းပိုင်း Gothic အဘိဓါန်၏မူကွဲ) ။ နှင့်အညီ, လစ္စဘွန်း gastronomy ကိုမြည်းစမ်းဖို့, အဘို့အမေးပါ ကုတ် pataniscasဒီငါးနဲ့လုပ်တဲ့ဒိုးနပ်တစ်မျိုး၊ က peixinhos da horta, ငါးမဟုတ်ပေမယ့်ကြော်ပဲမျိုးစုံဘောလုံးနှင့် Belémကိတ်မုန့်, အဘယ်သူ၏စာရွက်လျှို့ဝှက်ဖြစ်လို့ယူဆတယ်ဖြစ်ပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်၊ သင်မြင်နိုင်သည့်အတိုင်းသမိုင်းကြောင်းနှင့်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံများမှအလွန်ထူးခြားသောအစားအစာအထိ Tagus မြစ်တစ်လျှောက်ခရီးစဉ်သည်သင့်အားကမ်းလှမ်းထားသည်များစွာရှိသည်။ ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းသွားတဲ့အရေးအကြီးဆုံးနေရာတွေကိုသာပြောခဲ့တာပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွား » ကြည့်ဖို့ဘာလဲ » Tagus မြစ်ဝှမ်း: ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်မြို့များ